I-US iyakuhlawula nini irhafu yemozulu kuzo zonke ezo bhombu baziphosayo? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-11 Septemba 2019	• 2 Comments
Kubuhlungu kakhulu ngamazwi ukubona indlela i-US eqhubeka nokusasaza iibhombu zayo ngokungenamkhethe ngelixa abantu behlabathi bephantsi kwengxoxo yobuxoki "Ukufudumala komhlaba ngenxa ye-CO2 eninzi kakhulu kumkhathi'ihlawuliswa irhafu ephezulu. Egcwele ikratshi i-telegraph ngale ntsasa indlela umkhosi wamandla oManyeneyo woDibaniso loMsebenzi oDibeneyo (okwabandakanya neNetherlands) uza kuqhushumisa esiqithini eIraq ngenobunzima obungaphezu kweetoni ze-40. Iimbaleki ziya kucasha kwisiqithi.
Silapha kwakhona kwakhona sinikela ubungqina bakho obucekeceke kunye nokusasaza iindaba ezingeyonyani, ukunika umbono wokuba kusekho ukulwa nomkhosi ozimeleyo we-IS owayefuneka kakhulu kuloo mfazwe injeya eSyria. Oko kulwa eSyria kwakuyimfuneko ukuqinisa ubudlelwane kwinqanaba lokungaboni ngasonye phakathi kwamazwe aphesheya. Mna nawe kufuneka siqhubeke sikholelwa ukuba amazwe ayalwa, ukuze siqhubeke sikholelwa ekubambeni kwesandla esivelayo.
Yintoni le 'script esingesosikhulu' emva koko? Eso skripthi sisekelezwe kumbala okanye, ngamanye amagama, kabini. Sisicatshulwa esilandela iziprofetho zenkolo, apho iinkokheli zopolitiko kunye nabaphathi bazo bakhokelelela kwihlabathi ukuya kwimfazwe enkulu yokugqibela yehlabathi. Imfazwe yokugqibela yehlabathi mayibe malunga neJerusalem. Ewe ayizukwenzeka kwangoko ngomso, kuba xa uqala ukubona umyalezo, unokufumanisa ukuba ubukhosi obukhulu bamaSilamsi buza kuqala bayimele le nto. Uhlalutyo lwam lweminyaka luye lwakhokelela kwisigqibo sokuba le nto bubukumkani base-Ottoman. Ubukhosi base-Ottoman kunokwenzeka ukuba babuyiselwe kwi-2023, kunye nokuthatha iTurkey kwe-EU ngokuhambelana nokulindelweyo. Ndikucebisa ngalo mongo eli nqaku yifunde ngokucokisekileyo, kuba ndicacisa banzi ngeli lindelo. Imfazwe eSyria ibonelela umkhosi waseTurkey indawo entle yoqeqesho kuzo zonke izixhobo zayo ezitsha, ikwabonisa nendlela yokuqala iintonga zeenwele (okanye endaweni yoko: imifantu) yabonakala kubudlelwane phakathi kwe-US neTurkey.
I-yayilolutshaba oluzenzele olwafuneka kule mfazwe apho zonke iintlobo zezixhobo ezitsha zazinokuvavanywa kwaye nalapho imiqondiso yeskripti yenkosi yafika ebusweni. I-Turkey ngurhulumente wehlabathi ovelayo kwaye i-US yekumkani enkulu yeZiyonist esezantsi. Ngokuqinisekileyo ayizukuba kudala ngaphambi kokuba i-hegemony yaseMelika, esekwe ubukhulu becala kwiidola nakwezomkhosi, ifikelele esiphelweni. Kwaye ngelixa wonke umntu ejonge kwimfazwe yorhwebo phakathi kwe-US ne-China kunye nokufikelela esiphelweni sale nto kumlo wenyama, iTurkey ifumana ithuba lokuvulela ubunzima bayo bezomkhosi ngelixa wonke umntu ebukele ezi zigebenga zimbini. Imfazwe eSyria yanika iTurkey, ukongeza ekuvavanyiseni amandla ayo okulwa eNyakatho yeSyria, izixhobo 'zendlela yokubalekela', enokuthi (kwaye isenako) ukubeka uxinzelelo kwi-EU.
In eli nqaku usuka eBrandon Smit ungayifunda emva indlela umlo phakathi kwe-US ne-China eyinxalenye yeskripthi esikhulu. Onke amagunya ehlabathi asebenza ngesicatshulwa seemfazwe ezizimeleyo kunye "nokuchasana okunzima kwindawo ebonakalayo," ngokufihlakeleyo kwi-ajenda efanayo kunye nenjongo yokugqibela korhulumente wehlabathi oya kuphakama kwisiphithiphithi semfazwe yehlabathi yokugqibela. Ukuvuselelwa okulindelweyo koBukhosi base-Ottoman, ke, kuya kuba yinto yethutyana kwaye kuya kuba negalelo kuphela kwiziphithiphithi zomhlaba eziya kudalwa kule mfazwe yehlabathi yesithathu.
Ezi ngxelo zingasentla zinokuqondwa ngokukuko kuphela ukuba ngaba ngenene uwafunda amanqaku aphantsi konxibelelwano oluhlaza.
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl, alt-market.com
tags: 40, ibhomu, Umbutho oDibeneyo woDibaniso, Europe, is, amandla omoya, Nederland, sound, VS
11 Septemba 2019 kwi-14: 46
Kubuhlungu kodwa kuyinto eqhelekileyo nako konke oko
phantsi kwegama elithi uKhuselo
okanye ekwabizwa ngokuba kukhuseleko lweLizwe
Inqanawa yokuhamba ngenqanawa isebenzisa nje iitoni ze-200 zamafutha (= iilitha ze-200.000) ngosuku, ngamanye amaxesha nangaphezulu.
Ungayibona into etyiwayo yiphathi yeenqwelo moya ngosuku, nokuba inxibe kancinci
ukuziqhelanisa. jonga phantsi kwezithuthi kunye nokunye
16 Septemba 2019 kwi-09: 37
« I-NOS kunye ne-RTL zinika ingqalelo epheleleyo kwizibanzi ezinzulu zokufihla imveliso yazo enzulu
Ngaba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf uneempendulo kuyo yonke imibuzo yakho! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.420.842